talooyin shukaansi. Dater Professional.
Sannad kasta, boqolaal kun oo qof ka heli jireen 'kulan kaamil ah’ iyada oo loo marayo adeegyada shukaansiga online. Oo sannadda boqolaal kasta oo kumanaan ka badan ay ka niyad jabin ka khibradahooda. Mid ka mid ah waxyaabaha ka qeyb qaadanaya in kuwa ku dhib qaba shukaansiga online waa soo bixitaanka of the 'xirfad dater online', dheer ah waxaa asal Online Dating Magazine in lagu qeexo dad matala halis ah oo ku saabsan sida loo helo qof, laakiin aan ujeedadoodu tahay in ay taariikhda kasta ama xiriirka 'aad si dhab ah’ sababtoo ah ciyaarta soo socota waxaa laga yaabaa in si fiican.’
A professional dater online sida caadiga ah leeyahay saddex ama in ka badan oo ka mid ah caadooyinka soo socda:
> Iyadoo in ka badan lix qof Xariirinta waqti isku mid ah.
> Member of saddex ama in ka badan adeegyada shukaansiga online waqti isku mid ah.
> Relists profile gudahood 24 saacadood oo weyni xiriir.
> Firkradahaan dhowr isgaarsiinta kaliya 'la joojiyo’ si loo dhigay waqti galay isgaarsiinta cusub.
> Baarista farriimaha iyo adeegyada shukaansi dhawr jeer maalintii.
> Mar walba ayaa aaminsan in kulanka soo socda 'waxaa laga yaabaa in si fiican'.
> Dhowr jeer sannadkii yeelan doonaan in ka badan hal taariikhda, iyadoo dad kala duwan, dhigay ilaa muddo todobaad ah oo.
> Marka ugu horreysa ee calaamado dhib in xiriir ka iman kara, yaynaan wax jebin inuu ku soo laabto shukaansiga online.
> Dhuuntee profile, laakiin ma u masixi, marka si tartiib ah shukaansi hal qof.
> Markii uu ka soo laabtay taariikh, isla markiiba waxa ay hubinaysaa mail farriimaha cusub dadka kale.
Guud ahaan, qofka aanu kac ay yidhaahdo 'waxaan doonayaa in aan noqdo xirfadle dater a online’ markaas raacdayso iyada sida wax gool ah nolosha. Waa wax horumarinaya sida dhashay khibradaha shukaansiga online qofka. Waxa uu / ay aragto sida 'fudud’ waa in la helo taariikh cusub waxaana la soo bandhigay in wajiyo cusub shiidaa maalin kasta. Ka hor inta qofka u ogyahay, isaga / iyada waxaa la xidhiidhka dersin (ama ka badan) dadka waqti isku mid ah. Marka taariikhda la heshiiyaa hal qof waxaa weli jira lix rajada laga sugayo in qofka keliyoo marka isaga / iyada ka soo laabanaya taariikhda. Tani, markeeda, bilaabataa si ay u horumariyaan maskax a dago in qofka soo socda waxaa laga yaabaa in 'fiican,’ Sidaa darteed waa u fududahay in ay ka tagaan xiriirka ama waayo-aragnimo shukaansi ugu horreysa ee calaamado dhibaato ka shaqayn lahaayeen dhibaatada kuwa.
A professional dater online guud ahaan qarin doonaa profile ah oo ay kasoo horjeeddo waxaa la tirtiro markii galitaanka xiriir haasaawe gaar ah galay. Tusin, qofka aan la sida runta ah siinaya isaga ama iyada 100% in xiriirka ileen iyagu waxay ka diyaariyey dariiq baxsado fududahay in meeraha taariikhaha dib.
Daters online Professional, aadanba ku baraarugin, jira oo saamayn xun ku dadka ay kula soo xiriirtey inta lagu jiro sahano ay. Tusaale ahaan, professional dater a online laga yaabaa in la qoraal toddoba qof oo isku mar, marka rajo kale oo cusub oo xiiso leh baxdaa. Taa baddalkeeda, professional dater internetka ogolaanaya isgaarsiinta la mid (ama ka badan) oo ka mid ah toddoba qof oo kale si lama filaan ah u joojiyaan, tago qof aan jawaabo oo ka yaabban, 'Halkaas oo uu sameeyey / iyadu baaba'aan si?’ Dhibaatada kale ee ku hawl leh daters online keenaan shukaansiga online waa la'aanta go'an tahay run. Waxaa laga yaabaa in saddex, afar ama xitaa xiriirka ka badan hal sano ah. Xidhiidhka guud ahaan dhicisoobay iyo xirfad dater internetka ayaa taariikh cusub oo qarka u (iyadoo qof uu cusub / iyada la kulmay online) dhawr maalmood ah weyni ka ah gudahood.
Qofka uu leeyahay saddex ama in ka badan nisbayn of professional dater a online laga yaabaa in uusan dooneyn in uu qirtay in uu isagu / iyadu waa xirfad dater a online, laakiin sidaas samaynaya waa talaabada ugu horeysa ee xalinta dhibaatada. Tallaabooyinka kale ee xalinta dhibaatada yihiin:
> Gebi tirtirto aad profile(s) markaad soo gashid xiriir galay. Ma jiro dib u, Weeraryahanka kaliya.
> Aad qaaday ballan in aad xiriir la gaaro go'aan ah inay si adag uga shaqeeyaan iyada oo dhibaatooyinka. Marka aad sii arimaha xiriir waa waxa dadka ka caawiya si ay u koraan. Carar ahayn xal kuma jiro.
> Haddii aad joojisid la xidhiidhka qof, ha sameeyo turkey qabow. Ugu yaraan qof in dirto fariin edeb leh si uu isagu / iyadu ogyahay sababta. Qofka maamuusi doonaan waxaad ka badan for this.
> Raadi hal adeeg shukaansiga online in aad jeclaan asga leh. Tani ma aha ciyaar si aad u aragto sida badan oo cusub dadka aad la xariiri karaan. Qof kasta oo aad la xiriiri waa qof dhabta ah la dareenkooda dhabta ah. Ha u horseedi on.
> Kaliya kula xiriirto tiro yar oo dadka waqti.
> Ma dhicin maskaxda ee ma 'mid ku xiga waxaa laga yaabaa fiican.’ Halkii, waxay diiradda saaraan qofka aad la joogto, ogaadana in ay yihiin 'ugu fiican'. Markaas ay arintaas ka shaqaysiiso.
Daters online Professional Colkiisa dhaawici dad badan oo inta lagu guda jiro ee ay 'u quudhin'. Laakiin laga yaabaa in waxa ka xun yahay in xirfadle daters online is waxyeeleeyo sababtoo ah waxa ay waligood baran in ay ka shaqeeyaan iyada oo arrimaha xiriirka in uu soo saaro guusha xidhiidh mudo dheer. Nasiib wanaag, Niyad Adag, professional daters online bedeli karto iyo marka ay u daran diiradda la mid ah oo ku saabsan xiriir (sida ay ku sameeyeen shukaansi online) markaa xidhiidhka guud ahaan beddelin waayo aragnimo cajiib ah oo joogto ah uu keeno. Iyo in ay soo saartaa sheeko kale guul ka laba qof oo la kulmay online.
Lammaanayaasha ciday ku kulmaan dhibaatooyin isgaarsiinta jidka, haddii ay cusub shukaansi ama wada dabaal labaatankii sano. kiista Kuwani waa adag ...